Fiteny volapoky - Wikipedia
Ny fiteny volapioky na volapoky na koa volapük dia fiteny noforonin'ny mompera kristianina katôlika alemana Johann Martin Schleyer (1831-1912), avy ao Baden, any Alemaina.
Menade - Püki bal « olombelona iray - fiteny iray » amin'ny fiteny volapioky
Ny tsy nahazoan'ny fiteny volapoky fahombiazana tahaky ny fiteny esperanto na ny fiteny ido ankehitriny dia ny olana lehibe ny fiteny volapoky amin'ilay voambolana sarotra ianarana (kanefa mora tononona), miaraka amin'ny hasarotan'ny fanonona ny teny. Tsy tian'i Schleyer novana izany ka izay no nahatonga ny fiteny volapoky tsy dia be mpiteny intsony ankehitriny. Ankehitriny, ny teny namboarina be mpiteny dia ny fiteny esperanto (iray tapitrisa), ny fiteny ido (iray hetsy), ny fiteny interlingua (vitsy ny tena mpiteny, fa mora azon'ny olona mahay miteny fiteny latina, izany hoe eo amin'ny 900 tapitrisa eo manerana izao tontolo izao), vitsy zanapeo nohon'ny fiteny volapoky ireo fiteny naorina telo ireo, ary manamora ny fanononana izany.
3 Tsipelina ary fanononana
3.1 Ny litera r
4.1 Teny niavian'ny voambolana
Ny teny volapük, nogasiana ho volapoky na volapioky amin'ny teny malagasy, dia avy amin'ny fototeny vol midika 'izao tontolo izao' sy pük midika 'fiteny'. Araka izany, ny volapük dia midika 'fitenin'izao tontolo izao'. Amin'ny teny alemana, Weltsprache no teny anononana ny fiteny volapoky.
Nahomby ny fiteny volapoky, ary tonga hatrany amin'ny iray hetsy teo ho eo ny isann'y olona mianatra ilay fiteny any Eoropa ary any Amerika. Tany Aotrisy izy aloha no nanomboka niparitaka, satria tany no namorona ny orinasa hanaparitaka azy manerana izao tontoloi zao. Tonga niparitaka tany Nederlandy ilay fiteny tamin'ny 1884 ary tany Belzika. I Auguste Kerchkhoffs, mpampianatra any amin'ny école des hautes études commerciales (HEC) any Paris, dia nanaparitaka ny fiteny volapoky tany Frantsa tamin'ny alalan'ny famoahany ; taona vitsivitsy taoriana no namorona ny Fikambanam-pirenena ho an'ny fanaparitahana ny fiteny volapoky.
Nandray anjara amin'ny fanaparitahana ny fiteny volapoky tao amin'ireo firenena latina (Espaina, Italia, Portogaly) koa ny famoahana nataon'i Auguste Kerchkhoffs. Ary tamin'ny 1885 sy 1886 nanombona niparitaka tany Eoropa Avaratra sy Eoropa Atsinanana ny fiteny volapoky. Ary tamin'ny 1888, nanolotra ny fiteny volapoky an'ny tontolo miteny anglisy ny boky fianarana iray noprintiana tamin'ny taona 1888.
Araka ny nambaran'i Auguste Kerchkhoffs, eo amin'ny iray alin sy roa hetsy eo ho eo no isan'ny olona efa nianatra ny fiteny volapoky. Indroa na intelon'ny tena isan'ny mpahay teny volapoky izany isa izany. Marina fa betsaka ny isan'ny mpanaraka. Any Vienne ohatra, nandritry ny ririnina (Des. 1886 - Mar.1887), 2 500 no isan'ny mpianatra. Ary tamin'ny 1887 manerana izao tontoloi izao, 138 no isan'ny fikambanana volapoky ary 25 no isan'ireo gazety sy gazetiboky 11 amin'ny fiteny volapoky. Tamin'ny 1889, lasa 283 ny isan'ny fikambanana ary 25 gazetiboky. 316 no isan'ny boky fianarna fiteny volapoky anaty fiteny dimy amin'ny roapolo.
Maro ireo kaongresan'ny fiteny volapoky (tany Friedrichshafen tamin'ny volana Aogositra 1884, ary tany Munich tamin'ny Aogositra 1887) fa inona no fiteny ampiasaina mandritra ireo fihaonana ireo ? Hoy ny mpampianatra any amin'ny Polytechnikum an'i Zürich R. Lorenz tamin'ny 1908 hoe nanomboka very fahombiazana ny fiteny volapoky tamin'ny fanandramana ny hampiasa ny fiteny volapoky amin'ny fihaonana isan-taona manomboka ny taona 1888. Tsy ho tratra ilay tanjona hoy izy noho ny hasarotan'ny fiteny volapoky. Anefa fikambanana telo no noforonina : fikambanana iraisam-pirenana (Volapükaklub Valemik), Akademinan'ny fiteny volapoky (Kadem Volapüka), ary gazety ofisialy (Volapükabled Zenodik). I Schleyer no mitondra ireo fikambanana ireo.
Narahan'ny ady anaty io fahombiazana io ary io no nampanjavona ilay fiteny. Satria, noho ny hasarotan'ny fitsipi-pitenenan'ny fiteny volapoky na dia hoe manara-dalàna foana aza : misy mpiteny te-hanamora ny fitsipi-pitenenana, ary ny voambolana, volana amin'ny fiteny eoropeana navadibadik'i Schleyer, dia sarotra ianarana. Ary i Grabowsky, nandinika ilay fiteny volapoky, dia nilaza amin'i Zamenhof : "Ratsy be ny fahaizan'ny tompony ny teniny. Tamin'izahay niara-niresaka, nila nampiasaina matetika ny raki-bolana ary tsy haiko ho iza tamin'izahay roa no nanokatra azy matetika". Nisy ary betsaka ireo fangatahana ny hanamora ny fiteny volapoky, fa nitohina i Schleyer, ary nilaza izy fa azy irery io fiteny io ary noho izany dia izy irery no mahazo manova azy. Nanoboka nirava ny fiteny volapoky nanomboka teo : niteraka fiteny mifaninana ireo refôrma (Dil, Dilpok, Nuvo-Volapük, Balta, Spelin, Veltparl, Idiom Neutral), nanomboka teo verin'ny volapoky tsikelikely ireo mpiteny azy, maro tamin'ireo mpiteny volapoky taloha ireo no nianatra ny fiteny esperanto.
Tsipelina ary fanononanaHanova
Namorona endri-tsoratr hafa i Schleyer ho an'ny zanapeo misy tendro kambana, fa tsy dia miasa firy izy ireo ankehitriny.
c [tʃ] na [dʒ]
j [ʃ] na [ʒ]
x [ks] na [ɡz]
z [ts] na [dz]
Ny zanapeo misy tendro kambana amin'ny fiteny volapoky dia miasa amin'ny fiteny alemana ihany koa. Nanana fianjadiana tamin'ny fiteny volapoky noforonin'i Schleyer ny fiteny alemana. Anefa tsy manana fomba fanoratana hafa ny zanapeo misy tendro roa ny fiteny volapoky, ankoatran'ny soratra nokasain'i Scheleyer.
Tsy misy ny zanapeo misosona, tononona samirery ny zanapeo, na dia mifanesy aza.
Ny litera rHanova
Nialan'i Schleyer mihitsy ny litera r tamin'izy nanorina ny fiteny volapoky tamin'ny faran'ny taonjato faha 19, mba ho moramora kokoa ny fanononana ny fiteny volapoky ho an'ireo mpiteny sinoa. Ka noho izany, novain'i Schleyer ho l izay teny vahiny iombonana novolapokiana tamin'ny taonajato faha 19. Tafiditra tao ami'ny fiteny volapoky ihany ny litera r taorian'ny ny refôrman'i Arie de Jong tamin'ny 1929. Mampiasa ny litera r-l ny fiteny volapoky ankehitriny. (ohatra : lel 'vy'/ rel 'finoana')
Teny niavian'ny voambolanaHanova
Ny fiteny niavian'ny teny amin'ny fiteny volapoky dia matetika fiteny anglisy, mifangaro amin'ny fiteny frantsay ary fiteny alemana. Novaina kely ny teny mba hahamora ny fahalalana azy. Ary noho izany, ny teny vol sy pük dia avy amin'ny fiteny anglisy world ary speak. Raha tsy jerena loatra ny fanamorana ny fanononana ny volana amin'ny fiteny volapoky, tsikerain'ny mpanohina ny teny volapoky io fanovana endri-teny io. Torak'izany koa, voatsikeran'ny mpanohina ny fiteny naorina koa ny fiteny esperanto sy ny fiteny ido amin'ny fitovizan'ireo fiteny roa ireo amin'ny fiteny aty Eoropa, satria sarotra amin'ireo olona tsy nanana fiteny eoropeanina ho fiteny nibeazana ny mianatra fiteny esperanto noho ireo manana fiteny eoropeanina.
↑ Tsiahy ao amin'i Maria Ziolkowska' et Isaj Dratwer, Le Docteur Esperanto, 1959.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_volapoky&oldid=1042718"
Dernière modification le 4 Janoary 2022, à 11:30
Voaova farany tamin'ny 4 Janoary 2022 amin'ny 11:30 ity pejy ity.